काठमाडौं १२ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै शुरु भएको छैन् सरकारका काम कारवाही नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा फुटेर ओली पक्ष र माधव–प्रचण्ड पक्ष...
२०७२ को गोरखा महाभुकम्पबाँट पुरा उठ्न नपाउंदै कोभिड १९ ले थला पारेको अन्य क्षेत्रको जस्तै हाम्रो विद्युत क्षेत्रको वर्तमान उद्योग व्यवसायले वामे सर्न थाल्दा नथाल्दै नेपालमा फेरि सत्ताको राजनीतिले स...
काठमाडौं २८ माघ । सतीले सरापेको देशमा असल कार्य, मुलुक र जनताको भलाई गर्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि भलो भएको देखिएको छैन । जसरी असल नियत भएका राजनीतिक प्राणी कहिले पनि नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् । त्य...
काठमाडौंं २८ माघ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व नै आतंकित बनायो धेरै देशहरुले महिनौ दिन सम्म लकडाउन हुन पुगे जसले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध मात्रै भएन अर्थतन्त्रम...
काठमाडौं २१ माघ । नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास हेर्ने हो भने एक शताब्दी पुगिसकेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा पहिलो पटक नेपालमा बिजुली बलेको थियो । बेलायत सरकारको सहयोगमा वि.सं...
नागरिक एपको आवश्यकता र चुनौति
काठमाडौंं १४ माघ । नेपाल सरकारले नेपाललाई पनि डिजिटल युगमा फड्को मार्न हालसालै नयाँ प्रविधिको एप सार्वजनिक गरेको छ । यो एप कामचलाउ सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले सार्वजनिक ग...
काठमाडौं ७ माघ । नेपालको अधिकांश मानवीय बस्ती विभिन्न प्रकारले विपत्तिको जोखिममा छ । अझ देश कै राजधानी काठमाडौंको शहरी क्षेत्रका नागरिकले बाक्लो बसाई, व्यस्त सडक तथा प्रशस्त खुला ठाउँको अभावमा उकुस...
कहाँ चुक्यो विद्युत प्राधिकरण ?
काठमाडौं २९ पुस । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनाबाट वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन भएता पनि हिउँदको समयमा कम मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन...
कृषि प्रवद्र्धनमा सौर्य सिँचाइ
काठमाडौं २४ पुस । नेपालमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको छ । विगतमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि घरेलु प्रणालीमा मात्र सीमित थियो सौर्य प्रविधि । हाल आएर विद्युतीकरण भई नसकेका ग...
काठमाडौं २२ पुस । कुनै पनि देशको विकासले फड्को मार्न त्यो देशको राजनीति स्थिर हुन आवश्यक छ । यसको उदाहरण नेपाल स्वयम् बनेको छ । लामो समयपछि पाँच वर्षको स्थायी सरकार आएसँगै देशले विकासमा परिवर्तन नै...
काठमाडौ १६ पुस । जलविद्युत् विकास इतिहास केलाउँदा सुरुवातको हिसाबले नेपाल एसियामै अग्रणी स्थानमा आउँछ । करिब एक सय १० वर्ष पहिला निर्माण र सञ्चालन भएको पाँच सय किलोवाट क्षमताको फर्पिंङ जलविद्युत् क...
विद्युत खपतको उपाय पनि खोज्ने कि, निर्यात नै पहिलो विकल्प सरकार ?
पुस ८ काठमाडौ । विगत केही वर्षदेखि प्राधिकरण मुनाफामा छ तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुँदा बिक्री वा निर्यात गर्न नसके प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था केही समयमा न...
जलस्रोत उपयोगमा दीर्घकालीन सोच
पुस ५ काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ जारी गरेको छ । जलस्रोतको समग्र उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले असार २९ गते स्वीकृत गर...
कोरोना पछि कृषिमा विद्युतीकरण, थलिएको अर्थतन्त्रमा रोजगारी र अवसरको अवरण
भनिन्छ नि !, महामारीले संकट सँगै अवसर पनि ल्याउँदछ । पाँच वर्ष अघि नेपालमा गएको विनाशकारी भुकम्पले धेरै संकट आएपनि केही अवसर ल्याएको आभाष भने अवश्य नै भएको छ । यस्तै संकट गएको एक वर्ष देखि कोरोना भ...
देश गरिब बनाउन लुट्नु र लुटाउनु पर्दैन, ऊर्जामा गरिब बनाए पुग्छ
नेपालमा विद्युतको युग विक्रम संवत् १९६८ बाट शुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालामा निर्माण भएको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो र दक्षिण एसियाको दोस्रो जलविद्युत आय...